Mandeep Chahal's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Mandeep Chahal
Mandeep Singh, muvambi weSEO Discovery, inotungamira yedhijitari yekushambadzira kambani ine ruzivo mushandirapamwe mumunda weSEO kushambadzira uye nhandare yekutengesa kwedhijitari.
Yemunharaunda Ekushambadzira Matanho eMazhinji-Nzvimbo Bhizinesi
China, Kukadzi 4, 2021 China, Kukadzi 4, 2021 Mandeep Chahal
Kushanda rakabudirira yakawanda-nzvimbo bhizinesi kuri nyore… asi chete kana iwe uine chaiyo yemuno kushambadzira zano! Nhasi, mabhizinesi uye zvigadzirwa vane mukana wekuwedzera kwavo kusvika kupfuura vatengi vemuno nekuda kwekuita digitalization. Kana iwe uri muridzi wechiratidzo kana muridzi webhizinesi muUnited States (kana chero imwe nyika) uine zano chairo iwe unogona kukanda zvigadzirwa zvako nemasevhisi kune vangangove vatengi pasi rese. Fungidzira bhizinesi rine nzvimbo dzakawanda se